Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Nizeria » Zon'olombelona ny tweeting - any Nizeria ihany koa
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Kolontsaina • fanabeazana • Entertainment • Vaovaom-panjakana • Zon'olombelona • Vaovao • Vaovao Mafana Nizeria • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Orinasa Nizeriana, melohin'ny mpampiasa ny fampiatoana ny Twitter ao amin'ny firenena
Nidina toerana dimy i Nizeria, tany amin'ny 120, tao amin'ny World Index Freedom Freedom 2021 namboarin'ny Reporters With Border, izay nilazalaza an'i Nizeria ho iray amin'ireo firenena "mampidi-doza sy sarotra indrindra" any Afrika Andrefana ho an'ny mpanao gazety.
Andrasana ny governemanta Nizeriana hisampana ny Twitter 'tsy ho ela'.
Noraran'ny governemanta Nizeriana ny fandrarana Twitter any amin'ny firenena.
Miharatsy haingana ny fahalalahana miteny ao Nizeria.
Taorian'ny nahatonga ny valin-kafatra teo amin'ireo mpampiasa media sosialy sy ireo mpikatroka ny zon'olombelona noho ny fanitsakitsahana ny fahalalahana maneho hevitra ary nanimba ny fomba fanaovana raharaham-barotra tany Nizeria, ny governemanta ny firenena be mponina indrindra ao Afrika dia nilaza fa 'manantena' ny hanafoanana ny fandraràny ny Twitter izy ireo, nambaran'ny volana Jona. , ao anatin'ny "andro vitsivitsy".
Nampipoitra fanantenana tao amin'ny mpiserasera Twitter io fanentanana io izay maniry hiverina amin'ny sehatra media sosialy telo volana aorian'ny fampiharana ilay fampiatoana.
Ny minisitry ny fampahalalam-baovao ao Nizeria, Lai Mohammed, dia nilaza tamin'ny fampahalalam-baovao taorian'ny kabinetra androany fa mahafantatra ny fitaintainana ny governemanta Twitter niforona teo amin'ny Nizeriana ny fandrarana.
"Raha efa niato nandritra ny 100 andro izao ny fandidiana dia afaka milaza aminao aho fa miresaka vitsivitsy fotsiny isika, andro vitsivitsy monja izao," hoy i Mohammed, nefa tsy nanome fe-potoana.
Rehefa noterena bebe kokoa i Mohammed dia nilaza fa ny manampahefana sy ny tompon'andraikitra ao amin'ny Twitter dia tokony “manisy teboka ny I's ary hiampita ny T” alohan'ny hahatongavany amin'ny fifanarahana farany.
"Ho tena haingana dia haingana izany, raiso fotsiny ny teniko ho an'izany," hoy ny minisitra.
Niato ny governemanta Nizeriana Twitter tamin'ny fiandohan'ny volana jona taorian'ny nanesoran'ny orinasa ny lahatsoratra avy amin'ny filoha Muhammadu Buhari izay nandrahona ny fisarahana amin'ny faritra, izay nolazain'ny goavambe media sosialy fa nandika ny lalàny. Nilaza ihany koa ny mpisolovava jeneraly Nizeriana fa tokony hoenjehina ireo nanohitra ny fandrarana.
Ho valin'izany, Nizeriana am-polony sy vondrona mpiaro zon'olombelona iray eo an-toerana no nametraka fitoriana tany amin'ny fitsarana isam-paritra mikasa ny hanafoana ny fandraràn'ny governemanta ao amin'ny Twitter, milaza ny fanapahan-kevitra hampiato ny asan'ny sehatra media sosialy malaza be ho fiezahana hangina ny tsikera.